Pitch night: Practice your pitching skills 21 July 2016 6:00 pm - 8:00 pm Accelerator
Pitch night: Practice your pitching skills
6:00 pm - 8:00 pm 21 July Accelerator
Still practicing your perfect pitch in front ofamirror? Get some real feedback from our Accelerator mentors instead! Next Thursday, July 21, 6PM at Phandeeyar. If you’re not quite ready to take the stage, you are still most welcome to register and attend the event. But we encourage you to give itatry. This will be an informal, fun night of pitches, and you will get valuable feedback to your pitch. Tickets are free but the space is limited. Please register at least3days in advance if you want to pitch. If you want to register to pitch choose the "I'll pitch"-ticket If you wish to register to attend, but not to pitch, please choose the "I'll attend"-ticket.
Silicon Valley' viewing marathon 30 July 2016 6:00 pm - 10:30 pm Accelerator
Silicon Valley' viewing marathon
6:00 pm - 10:30 pm 30 July Accelerator
July Tech Meetup: Myanmar civic apps demo 29 July 2016 6:00 pm - 8:00 pm Tech
July Tech Meetup: Myanmar civic apps demo
6:00 pm - 8:00 pm 29 July Tech
Digital Media Meetup: The Future Of Journalism 28 July 2016 3:30 pm - 5:00 pm Digital Media Meetup
Digital Media Meetup: The Future Of Journalism
3:30 pm - 5:00 pm 28 July Digital Media Meetup
Join us foraspecial afternoon digimedia meetup next Thursday with two highly accomplished journalists. Sheila Coronel, an accomplished investigative journalist who began her career in the Philippines and Reg Chua who develops Thomson Reuter's tech-enabled news projects will be at Phandeeyar to share their thoughts on how tech is changing investigative journalism and reporting.
Digital Rights Meetup: Violence Against Women in the Digital World 27 July 2016 6:00 pm - 8:00 pm Civic
Digital Rights Meetup: Violence Against Women in the Digital World
6:00 pm - 8:00 pm 27 July Civic
Accelerate your StartUp: Information Session on Phandeeyar's new Accelerator program 26 July 2016 6:00 pm - 8:00 pm Accelerator
Accelerate your StartUp: Information Session on Phandeeyar's new Accelerator program
6:00 pm - 8:00 pm 26 July Accelerator
You're planning on launchingastartup or have already launched? You're curious to find out what an Accelerator does and what Phandeeyars amazing view from the office looks like? Join our information session for in-depth information and ask the team anything you want to know.http://accelerator.phandeeyar.org #accelerateMM
Pitching 101 and Founder Networking 14 July 2016 6:00 pm - 8:00 pm Entrepreneurship
6:00 pm - 8:00 pm 14 July Entrepreneurship
You haveagreat idea, an awesome team and want to convince investors to fund you? Join our next Accelerator Workshop Thursday July 14, 6PM where our mentor and extraordinary pitch coach Andy Annett, Managing Director at Today Ogilvy and Mather, will give youaton of valuable insights on how to pitch almost anything - to anybody! Furthermore, Aung Sithu Kyaw, founder and CEO of Xavey will talk about good practices and will show youastandard set of slides that every pitch needs to include. On top of that he’ll share the best tips for vocal preparation and public speaking. After the workshop there’ll be time to mingle with like-minded founders and grab some snacks. And also note that the week after, we haveapitch night, where you can register to pitch in front of an audience and get valuable feedback from our experienced mentors. Watch this page for more information!
Digital Media Meetup: Digital Advertising7July 2016 6:00 pm - 12:00 am Digital Media
6:00 pm - 12:00 am 07 July Digital Media
Ross Settles, MDIF Senior Advisor for Digital Media, isaleading media and business development consultant and investor, andaveteran in the digital media scene in Asia. On thursday, July7he will talk about the current evolution in digital advertising. In particular, the impact of mobile phones, social networks and video on the modern art and science of advertising. He will also share his thoughts about leapfrog opportunities for Myanmar’s digital and advertising communities. How can Myanmar ad agencies, creative talent and online leaders help the country leapfrog to advertising leadership in Asia?
Accelerator Information Session6July 2016 6:00 pm - 12:00 am Accelerator
6:00 pm - 12:00 am 06 July Accelerator
Accelerate Your Startup With Phandeeyar Accelerator! Information Session @ Phandeeyar on July 6, 6PM. If you are planning to launchastartup, or have already launched, Phandeeyar Accelerator can help you with capital, office space, mentoring and the tools you need to grow. Join our information session on Friday, June 17, 6PM at Phandeeyar for in-depth information, and forachance to ask questions from the Phandeeyar Accelerator team. http://accelerator.phandeeyar.org #accelerateMM
3D Printing and Product Design Workshop3July 2015 9:00 am - 6:00 pm Skills Exchange
3D Printing and Product Design Workshop
9:00 am - 6:00 pm 03 July Skills Exchange
ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့နဲ့ ၄ ရက်နေ့မှာ ၂ ရက်ကြာ 3D Printing and Product Design workshop ရှိပါတယ်။ 3D Printer ကို အသုံးပြုလို့ ကုန်ပစ္စည်း များ၊ နမူနာများ တီထွင်ဖန်တီးခြင်း အဆင့်ဆင့်ကို ပြုလုပ်စေရန် အဖွဲ့များကို guide လုပ်ပေးတဲ့ workshop ဖြစ်ပါတယ်။
Workshop ဟာ 3D modelling နဲ့ physical product design များဖြင့် အလုပ်လုပ်ရတဲ ကုမ္ဗဏီနဲ့ အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အထူးသဖြင့် -
- 3D animation နှင့် ဂိမ်း စတူဒီယိုများ
- အိမ်တွင်း ဒီဇိုင်းနှင့် ဗိသုကာ လုပ်ငန်းများ
- product design များဖြင့် လုပ်ကိုင်သော စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ
- prosthetic များဖြင့် လုပ်ကိုင်သော ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပညာ ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ
- Hardware နှင့် ပက်သက်၍ စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာနေသူများ အားလုံး ပါဝင်ပါတယ်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ လုပ်ငန်းကြီးများတွင် လုပ်ကိုင်သော အတွေ့အကြုံဝါရင့် ဒီဇိုင်နာ ဖြစ်တဲ့ ကိုထွန်းမင်းစိုးမှ ဦးဆောင်လို့ workshop လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့ လေးဖွဲ့ လက်ခံပြီး တစ်ဖွဲ့ကို ၅ ဦး သို့မဟုတ် ၆ဦးအထိ ပါဝင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်ဖို့ စာရင်းပေးမယ်ဆိုရင် နှစ်ရက်စလုံး ပါဝင်နိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ 3D Printing and Product Design workshop ကို ပါဝင်တက်ရောက်ချင်တယ် ဆိုရင် http://goo.gl/forms/j9En4uCuvV မှာ စာရင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ဇူလိုငျလ ၃ ရကျနနေဲ့ ၄ ရကျနမှေ့ာ ၂ ရကျကွာ 3D Printing and Product Design workshop ရှိပါတယျ။ 3D Printer ကို အသုံးပွုလို့ ကုနျပစ်စညျး မြား၊ နမူနာမြား တီထှငျဖနျတီးခွငျး အဆငျ့ဆငျ့ကို ပွုလုပျစရေနျ အဖှဲ့မြားကို guide လုပျပေးတဲ့ workshop ဖွဈပါတယျ။
workshop ဟာ 3D modelling နဲ့ physical product design မြားဖွငျ့ အလုပျလုပျရတဲ ကုမ်ဗဏီနဲ့ အဖှဲ့အစညျးမြားအတှကျ ရညျရှယျပွီး အထူးသဖွငျ့ -
- 3D animation နှငျ့ ဂိမျး စတူဒီယိုမြား
- အိမျတှငျး ဒီဇိုငျးနှငျ့ ဗိသုကာ လုပျငနျးမြား
- product design မြားဖွငျ့ လုပျကိုငျသော စကျမှုအငျဂငျြနီယာမြား
- prosthetic မြားဖွငျ့ လုပျကိုငျသော ဆေးဝါးနှငျ့ ဆေးပညာ ဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးမြား
- Hardware နှငျ့ ပကျသကျ၍ စိတျပါဝငျစားစှာ လလေ့ာနသေူမြား အားလုံး ပါဝငျပါတယျ။
ကယျလီဖိုးနီးယားမှ လုပျငနျးကွီးမြားတှငျ လုပျကိုငျသော အတှအေ့ကွုံဝါရငျ့ ဒီဇိုငျနာ ဖွဈတဲ့ ကိုထှနျးမငျးစိုးမှ ဦးဆောငျလို့ workshop လုပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
အဖှဲ့ လေးဖှဲ့ လကျခံပွီး တဈဖှဲ့ကို ၅ ဦး သို့မဟုတျ ၆ဦးအထိ ပါဝငျစမှော ဖွဈပါတယျ။
ပါဝငျဖို့ စာရငျးပေးမယျဆိုရငျ နှဈရကျစလုံး ပါဝငျနိုငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ 3D Printing and Product Design workshop ကို ပါဝငျတကျရောကျခငျြတယျ ဆိုရငျ http://goo.gl/forms/j9En4uCuvV မှာ စာရငျးပေးနိုငျပါတယျ။
On July 3-4, Phandeeyar is hostinga2-day 3D Printing and Product Design workshop which is intended to guide teams through the process of designing and prototyping physical products usinga3D printer.
The workshop is ideal for companies and organisations that are working with 3D modelling and physical product design, such as
- 3D animation and game development studios
- Interior design and architecture firms
- Mechanical engineers working with product design
- Medical organisations working with prosthetics
- Hobbyists who are interested in hardware hacking
We have an experienced industrial designer who works in California, Ko Tun Min Soe, leading the workshop.
We will invite4teams, each with about 5-6 members, to participate.
Note: Full participation in all2days of the workshop is required.
If you are interested in participating, please fill out this form: http://goo.gl/forms/j9En4uCuvV
Workshop: Startup basics2July 2016 1:00 pm - 5:00 pm Accelerator
Workshop: Startup basics
1:00 pm - 5:00 pm 02 July Accelerator
Mingle with like-minded founders, learn how to validate an idea, formastrong team and prepare an execution plan, and exercise drawing up your Business Model on the Lean Canvas.
Science Is Fun 27 June 2015 9:00 am - 12:00 pm Community Building
9:00 am - 12:00 pm 27 June Community Building
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး စမ်းသပ်ဖို့လည်း လွယ်ကူတဲ့ စမ်းသပ်ချက်လေးတွေကို လုပ်ချင်ပါသလား? ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့ စနေနေ့မှာ လုပ်မှာမို့ ဖေဖေ၊ မေမေတွေလည်း ကိုယ့်သားသမီးတွေ Virtual Realityနဲ့ သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်လေးတွေကို လုပ်ရင်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအသစ်တွေ ရဖို့အတွက် ဒီမှာ register လုပ်လို့ ရပြီနော်! http://goo.gl/SbjsnK
စိတျဝငျစားစရာကောငျးပွီး စမျးသပျဖို့လညျး လှယျကူတဲ့ စမျးသပျခကျြလေးတှကေို လုပျခငျြပါသလား? ကြောငျးပိတျရကျဖွဈတဲ့ စနနေမှေ့ာ လုပျမှာမို့ ဖဖေေ၊ မမေတှေလေညျး ကိုယျ့သားသမီးတှေ Virtual Realityနဲ့ သိပ်ပံစမျးသပျခကျြလေးတှကေို လုပျရငျး မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးအသဈတှေ ရဖို့အတှကျ ဒီမှာ register လုပျလို့ ရပွီနျော! http://goo.gl/SbjsnK
Want to experiment with interesting and easy science stuff? As the event is on Saturday, parents can help their kids to test and experiment science stuff and virtual reality and also to build their network. Free but register here: http://goo.gl/SbjsnK
June Tech Meetup 25 June 2015 6:00 pm - 8:00 pm Tech Meetup
June Tech Meetup
6:00 pm - 8:00 pm 25 June Tech Meetup
Join this monthly networking event & get demos of some of the latest Made-in-Myanmar tech products. This month: “Snackshots” (NEX) & “Mell” (Xavey). Free but register at https://goo.gl/Bfy40W
မွနျမာပွညျမှာ ရေးတဲ့ app အသဈတှေ ပွသမယျ့ အပွငျ အခငျြးခငျြး တှဆေုံ့ မိတျဆကျကွဖို့ အတှကျ လစဉျလုပျတဲ့ ဒီပှဲကို လာရောကျဖို့ ဖိတျချေါပါရစေ။ ဒီလမှာ အသဈထှကျတဲ့ iOS အတှကျ Nex ကရေးတဲ့ “Snackshots” ဆိုတဲ့ app နဲ့ Xavey က ရေးတဲ့ “Mell” ဆိုတဲ့ app တှကေို မွညျးစမျး မိတျဆကျပေးမှာပါ။ အခမဲ့ပှဲဖွဈပမေယျ့ https://goo.gl/Bfy40W တှငျ စာရငျးပေးပါ။
မြန်မာပြည်မှာ ရေးတဲ့ app အသစ်တွေ ပြသမယ့် အပြင် အချင်းချင်း တွေ့ဆုံ မိတ်ဆက်ကြဖို့ အတွက် လစဉ်လုပ်တဲ့ ဒီပွဲကို လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ဒီလမှာ အသစ်ထွက်တဲ့ iOS အတွက် Nex ကရေးတဲ့ “Snackshots” ဆိုတဲ့ app နဲ့ Xavey က ရေးတဲ့ “Mell” ဆိုတဲ့ app တွေကို မြည်းစမ်း မိတ်ဆက်ပေးမှာပါ။ အခမဲ့ပွဲဖြစ်ပေမယ့် https://goo.gl/Bfy40W တွင် စာရင်းပေးပါ။
Search Engine Optimization Workshop 25 June 2015 9:00 am - 5:00 pm Skills Exchange
9:00 am - 5:00 pm 25 June Skills Exchange
မိမိ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို Google ကဲ့သို့ Search Engine မှာ လွယ်တကူတွေ့ရှိရန် ပြုလုပ်ခြင်းကို Search Engine Optimization လုပ်ဆောင်ချက်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ယင်း အတတ်ပညာကို လေ့လာပြီး တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ မိမိရဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို လက်တွေ့ကျကျ ပြုလုပ်သွားရမှာပါ။ လာမယ့် "ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ သောကြာနေ့ မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ" ကြာမြင့်တဲ့ workshop ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်ချင်ရင် https://goo.gl/o6yl3c တွင် စာရင်းပေးပါ. တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူများကို workshop မတိုင်ခင် ၄ ရက်ကြိုတင် ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးသွားပါ့မယ်.
မိမိ အဖှဲ့အစညျး သို့မဟုတျ လုပျငနျးရဲ့ ဝဘျဆိုဒျကို Google ကဲ့သို့ Search Engine မှာ လှယျတကူတှရှေိ့ရနျ ပွုလုပျခွငျးကို Search Engine Optimization လုပျဆောငျခကျြလို့ ချေါပါတယျ။ ယငျး အတတျပညာကို လလေ့ာပွီး တဈပွိုငျနကျတညျးမှာပဲ မိမိရဲ့ ဝဘျဆိုဒျကို လကျတှကေ့ကြ ပွုလုပျသှားရမှာပါ။ လာမယျ့ ဇှနျလ ၂၆ ရကျနေ့ သောကွာနေ့ မနကျ ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ကွာမွငျ့တဲ့ workshop ဖွဈပွီး တကျရောကျခငျြရငျ https://goo.gl/o6yl3c တှငျ စာရငျးပေးပါ. တကျရောကျခှငျ့ရှိသူမြားကို workshop မတိုငျခငျ ၄ ရကျကွိုတငျ ပွနျလညျဆကျသှယျပေးသှားပါ့မယျ.
Violence and Media In Myanmar 24 June 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowledge Exchange
Violence and Media In Myanmar
6:00 pm - 8:00 pm 24 June Knowledge Exchange
Facebook was blocked after the Mandalay riots, but what's the connection between media & mass violence? Hear the findings of the Myanmar Media and Society Research Project. Wednesday 24th June at 6pm. Free but register here http://goo.gl/CJye6Q
မန္တလေးမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်တော့ Facebook ကို block လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတော့ မီဒီယာနဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြားထဲမှာ ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမလဲ။ မြန်မာ့ မီဒီယာနဲ့ Social Research Project အကြောင်းကို လာမယ့် ၂၄ ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ ၆ နာရီမှာ ဟောပြောပါမယ်။ အခမဲ့ပွဲဖြစ်ပေမယ့် http://goo.gl/CJye6Q တွင် စာရင်းပေးပါ။
မန်တလေးမှာ ပဋိပက်ခဖွဈတော့ Facebook ကို block လုပျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီတော့ မီဒီယာနဲ့ ပဋိပက်ခတှကွေားထဲမှာ ဘယျလို အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိမလဲ။ မွနျမာ့ မီဒီယာနဲ့ Social Research Project အကွောငျးကို လာမယျ့ ၂၄ ရကျနေ့ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ညနေ ၆ နာရီမှာ ဟောပွောပါမယျ။ အခမဲ့ပှဲဖွဈပမေယျ့ http://goo.gl/CJye6Q တှငျ စာရငျးပေးပါ။
Lawful Interception Workshop 23 June 2015 9:00 am - 5:00 pm Knowledge Exchange
Lawful Interception Workshop
9:00 am - 5:00 pm 23 June Knowledge Exchange
Are you concerned about when the government can access your Facebook & Viber and listen to your phone calls? The government has promised to ask your opinion about this critical issue. Join this workshop to learn more about "lawful interception" and how you can participate in the public consultation. Register now http://goo.gl/z836tA
သင့်ရဲ့ Facebook နဲ့ Viber အချက်အလက်များကို အစိုးရက ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင် သင် လက်ခံပါသလား... အစိုးရမှ နေပြီးတော့ ယင်း ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်လို့ သင့်အမြင်ကို ရယူဖို့ ကတိပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Lawful interception လို့ခေါ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို တရားဥပဒေဖြင့် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနားထောင်ခြင်း ဆိုင်ရာ အကြောင်းကို လူတိုင်း သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ပါဝင်မှုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ လာမယ့် ၂၃ ရက်နေ့၊ အင်္ဂါနေ့ ဖန်တီးရာသို့ ကြွခဲ့ပါ။ မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအထိ တစ်နေ့တာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေး ဟောပြောပွဲ ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် http://goo.gl/z836tA တွင် စာရင်းပေးပေးပါ။
သငျ့ရဲ့ Facebook နဲ့ Viber အခကျြအလကျမြားကို အစိုးရက ဝငျရောကျကွညျ့ရှုမယျဆိုရငျ သငျ လကျခံပါသလား... အစိုးရမှ နပွေီးတော့ ယငျး ကိစ်စနဲ့ ပကျသကျလို့ သငျ့အမွငျကို ရယူဖို့ ကတိပေးထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ Lawful interception လို့ချေါတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို တရားဥပဒဖွေငျ့ ဝငျရောကျ ကွညျ့ရှုနားထောငျခွငျး ဆိုငျရာ အကွောငျးကို လူတိုငျး သိဖို့လိုအပျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ပါဝငျမှုလညျး လိုအပျပါတယျ။ လာမယျ့ ၂၃ ရကျနေ့၊ အင်ျဂါနေ့ ဖနျတီးရာသို့ ကွှခဲ့ပါ။ မနကျ ၉ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအထိ တဈနတေ့ာ အလုပျရုံ ဆှေးနှေး ဟောပွောပှဲ ဖွဈပွီး အခမဲ့ပှဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ http://goo.gl/z836tA တှငျ စာရငျးပေးပေးပါ။
When Can The Government Access My Data? 22 June 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowledge Exchange
When Can The Government Access My Data?
6:00 pm - 8:00 pm 22 June Knowledge Exchange
WHEN CAN THE GOVERNMENT ACCESS MY DATA? The government is currently considering its rules around "lawful interception" Learn more about this critical issue. Free but register here http://goo.gl/BbwW3S
အစိုးရအနေနဲ့ မိမိရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ရှု ရယူနိုင်ပါသလဲ.. Lawful interception လို့ခေါ်တဲ့ အချက်အလက်ဒေတာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရနိုင်မယ့် ဥပဒေ အမျိုးအစားတစ်ခုကို အစိုးရမှ ပြုလုပ်ဖန်တီးရန် ဆွေးနွေးနေပြီး သင့်အနေနဲ့ ယင်းအပေါ်ကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ... ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး သိရအောင် Institute for Humans Rights and Business မှာ ICT Program Manger ဖြစ်သူ Lucy ရဲ့ ဟောပြောမှုကို လာရောက်နားထောင်ပါ။ အခမဲ့ပွဲဖြစ်ပြီး တက်ရောက်လိုပါက http://goo.gl/BbwW3S တွင် စာရင်းပေးပါ။ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ဖန်တီးရာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရအနနေဲ့ မိမိရဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ကွညျ့ရှု ရယူနိုငျပါသလဲ.. Lawful interception လို့ချေါတဲ့ အခကျြအလကျဒတောမြားကို ဝငျရောကျကွညျ့ရှုခှငျ့ရနိုငျမယျ့ ဥပဒေ အမြိုးအစားတဈခုကို အစိုးရမှ ပွုလုပျဖနျတီးရနျ ဆှေးနှေးနပွေီး သငျ့အနနေဲ့ ယငျးအပျေါကို ဘယျလိုမွငျပါသလဲ... ဒါနဲ့ ပကျသကျပွီး သိရအောငျ Institute for Humans Rights and Business မှာ ICT Program Manger ဖွဈသူ Lucy ရဲ့ ဟောပွောမှုကို လာရောကျနားထောငျပါ။ အခမဲ့ပှဲဖွဈပွီး တကျရောကျလိုပါက http://goo.gl/BbwW3S တှငျ စာရငျးပေးပါ။ ဇှနျလ ၂၂ ရကျနေ့ ညနေ ၆ နာရီ ဖနျတီးရာမှာ ဖွဈပါတယျ။
Google I/O Extended Yangon 21 June 2015 2:00 pm - 5:00 pm Tech Meetup
Google I/O Extended Yangon
2:00 pm - 5:00 pm 21 June Tech Meetup
Want to re-live the Google I/O experiences? Want to know more about Google-related technologies? Want to meet with people who are already familiar with Google products? Come and join us at Google I/O extended Yangon this Sunday on 21st at Phandeeyar, Myanmar Innovation Lab. Free but register here https://goo.gl/OhQFtU
Google I/O အတှအေ့ကွုံမြားကို ပွနျလညျ ခံစားလိုပါသလား။ Google နှငျ့ သကျဆိုငျတဲ့ နညျးပညာမြားကို သိလိုပါသလား။ Google ရဲ့ ထုတျကုနျတှကေို အသုံးခနြသေူမြားနဲ့ တှဆေုံ့စကားပွောခငျြ ပါသလား။ လာမယျ့ ၂၁ရကျနေ့ တနင်ျဂနှနေေ့ မှာ ကငျြးပမယျ့ Google I/O extended Yangon ကို လာရောကျလလေ့ာဖို့ ဖိတျချေါပါတယျ။ အခမဲ့ဖွဈပွီး ဒီလငျ့(ချ)မှာ စာရငျးပေးသှငျးပါ။ https://goo.gl/OhQFtU
Google I/O အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည် ခံစားလိုပါသလား။ Google နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ နည်းပညာများကို သိလိုပါသလား။ Google ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို အသုံးချနေသူများနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောချင် ပါသလား။ လာမယ့် ၂၁ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ ကျင်းပမယ့် Google I/O extended Yangon ကို လာရောက်လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ဒီလင့်(ခ်)မှာ စာရင်းပေးသွင်းပါ။ https://goo.gl/OhQFtU
Build Your Own Website 19 June 2015 9:00 am - 5:00 pm Civil Society Workshop
9:00 am - 5:00 pm 19 June Civil Society Workshop
ဝဘ်ဆိုဒ် ပြုလုပ်ခြင်း အခမဲ့ သင်တန်း
WordPress CMS ဖြင့် ဝဘ်ဆိုဒ်လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့် အနှစ်ချုပ် မှတ်စုစာအုပ်ကို ဖန်တီးရာမှ ပြုစုထားပေးပြီး http://goo.gl/iC2DzN တွင် အခမဲ့ ယူပါ။
လာမယ့် အပတ် သောကြာနေ့ (ဇွန် ၁၉ ရက်နေ့) မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိ သင်ကြားမယ့် WordPress CMS ဖြင့် ဝဘ်ဆိုဒ်ပြုလုပ်နည်း သင်တန်းလည်း တက်နိုင်ပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ်မရှိသေးသော CSO/ NGO များအတွက် သီးသန့်သာ ဖြစ်ပြီး အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများကို နှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်ရှိပြီးသားများကို လက်မခံသေးပါ။ အခမဲ့ သင်တန်းဖြစ်တာကြောင့် လူဦးရေ အကန့်အသတ် ရှိပါတယ်။
သင်တန်း တက်ရောက်လိုသူ အနေနဲ့ သင်တန်းကြေး ပေးစရာမလိုသော်လည်း မိမိ၏ အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို တစ်ခါတည်း ပြုလပ်သွားရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် Domain နဲ့ Hosting ရယ်ဒီရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုင်တင်လာပြီး ဝယ်လို့ရသလို ဖန်တီးရာရောက်မှ ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း သင်တန်းမှာ World Wide Myanmar ကုမ္ဗဏီမှ တာဝန်ရှိသူက တစ်ခါတည်း account setup လုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ် အကြမ်းဖျဉ်း ငါးသောင်း ရှိပါတယ်။
သင်တန်းသားလွတ်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းက မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ် ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျခံပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ https://goo.gl/YVa6km တွင် စာရင်းပေးသွင်းပါ။ တက်ရောက်ခွင့် ရှိသူများကို အင်္ဂါနေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး အကြောင်းပြန်ပေးပါ့မယ်။
ဝဘျဆိုဒျ ပွုလုပျခွငျး အခမဲ့ သငျတနျး
WordPress CMS ဖွငျ့ ဝဘျဆိုဒျလုပျနညျး အဆငျ့ဆငျ့ အနှဈခြုပျ မှတျစုစာအုပျကို ဖနျတီးရာမှ ပွုစုထားပေးပွီး http://goo.gl/iC2DzN တှငျ အခမဲ့ ယူပါ။
လာမယျ့ အပတျ သောကွာနေ့ (ဇှနျ ၁၉ ရကျနေ့) မနကျ ၉ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီခှဲအထိ သငျကွားမယျ့ WordPress CMS ဖွငျ့ ဝဘျဆျိုဒျပွုလုပျနညျး သငျတနျးလညျး တကျနိုငျပါတယျ။ ဝဘျဆိုဒျမရှိသေးသော CSO/ NGO မြားအတှကျ သီးသနျ့သာ ဖွဈပွီး အခွားသော အဖှဲ့အစညျးမြားကို နှငျ့ ဝဘျဆိုဒျရှိပွီးသားမြားကို လကျမခံသေးပါ။ အခမဲ့ သငျတနျးဖွဈတာကွောငျ့ လူဦးရေ အကနျ့အသတျ ရှိပါတယျ။
သငျတနျး တကျရောကျလိုသူ အနနေဲ့ သငျတနျးကွေး ပေးစရာမလိုသျောလညျး မိမိ၏ အဖှဲ့အစညျးအတှကျ ဝဘျဆိုဒျကို တဈခါတညျး ပွုလပျသှားရမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ Domain နဲ့ Hosting ရယျဒီရှိထားဖို့လိုအပျပါတယျ။ မိမိကိုယျတိုငျ ကွိုငျတငျလာပွီး ဝယျလို့ရသလို ဖနျတီးရာရောကျမှ ဝယျမယျဆိုရငျလညျး သငျတနျးမှာ World Wide Myanmar ကုမ်ဗဏီမှ တာဝနျရှိသူက တဈခါတညျး account setup လုပျပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကုနျကစြရိတျ အကွမျးဖဉျြး ငါးသောငျး ရှိပါတယျ။
သငျတနျးသားလှတျပေးသော အဖှဲ့အစညျးက မိမိအဖှဲ့အစညျးအတှကျ ဝဘျဆိုဒျ ကုနျကစြရိတျကို ကခြံပေးရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါတယျ။ https://goo.gl/YVa6km တှငျ စာရငျးပေးသှငျးပါ။ တကျရောကျခှငျ့ ရှိသူမြားကို အင်ျဂါနေ့ နောကျဆုံးထားပွီး အကွောငျးပွနျပေးပါ့မယျ။
Building Myanmar's Voter Registration System 10 June 2015 6:00 pm - 8:00 pm Tech Meetup
Building Myanmar's Voter Registration System
6:00 pm - 8:00 pm 10 June Tech Meetup
*Wednesday at 6pm* Meet the CEO of the company that built Myanmar's voter management list system. Free but register here http://goo.gl/RfBpsU
မြန်မာပြည်အတွက် Voter Management system ကို တည်ဆောက်ခဲ့သူကတော့ Wirecraft ကုမ္ဗဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း ကုမ္ဗဏီရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Quentin Berder ဟာ ဖန်တီးရာကို လာရောက်လို့ သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ data science, data visualization အကြောင်းကို လာရောက် ဟောပြောမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ ပွဲဖြစ်ပြီး တက်ရောက်လိုပါက http://goo.gl/RfBpsU တွင် စာရင်းသွင်းပါ။ လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ ၆နာရီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မွနျမာပွညျအတှကျ Voter Management system ကို တညျဆောကျခဲ့သူကတော့ Wirecraft ကုမ်ဗဏီ ဖွဈပါတယျ။ ယငျး ကုမ်ဗဏီရဲ့ CEO ဖွဈတဲ့ Quentin Berder ဟာ ဖနျတီးရာကို လာရောကျလို့ သူ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံနဲ့ data science, data visualization အကွောငျးကို လာရောကျ ဟောပွောမှာ ဖွဈပါတယျ။ အခမဲ့ ပှဲဖွဈပွီး တကျရောကျလိုပါက http://goo.gl/RfBpsU တှငျ စာရငျးသှငျးပါ။ လာမယျ့ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ညနေ ၆နာရီမှာ ဖွဈပါတယျ။
Innovation, Technology & Social Change9June 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowlegde Exchange
Innovation, Technology & Social Change
6:00 pm - 8:00 pm 09 June Knowlegde Exchange
What do you do after making billions of dollars creating eBay? You startafirm that invests in entrepreneurs who are making the worldabetter place. Hear from the Managing Partner of Omidyar Network, one of the world's biggest philanthropic investment firms. Register here http://goo.gl/Nzr7CD
eBay ဆိုတာ ကမ္ဘာကို အွန်လိုင်းဈေးဝယ်ပလက်ဖောင်းချပြီး အောင်မြင်ချမ်းသာသွားတဲ့ ကုမ္ဗဏီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေ အောင်မြင်ပြီးနောက် ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ အောင်မြင်မှုက ရတဲ့ငွေတွေကို Omidyar Network လို့ အမည်ရတဲ့ အများအကျိုးပြု အဖွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကို ဘက်ပေါင်းစုံကနေ တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ ဘယ် အဖွဲ့အစည်း အမျိုးအစားကို မဆို ငွေကြေး လှူဒါန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအဖွဲ့မှ Manaing partner ဖြစ်တဲ့ Matt Bannick မှ လာရောက်လို့ ဖန်တီးရာမှာ innovation, technology နဲ့ social change အကြောင်း ပြောပါမယ်... လာမယ့် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့၊ အင်္ဂါညနေ ၆ နာရီဖြစ်ပြီး တက်ရောက်လိုပါက http://goo.gl/Nzr7CD တွင် စာရင်းသွင်းပါ။
eBay ဆိုတာ ကမ်ဘာကို အှနျလိုငျးဈေးဝယျပလကျဖောငျးခပြွီး အောငျမွငျခမျြးသာသှားတဲ့ ကုမ်ဗဏီဖွဈပါတယျ။ သူတို့တှေ အောငျမွငျပွီးနောကျ ဘာလုပျသလဲဆိုတော့ အောငျမွငျမှုက ရတဲ့ငှတှေကေို Omidyar Network လို့ အမညျရတဲ့ အမြားအကြိုးပွု အဖှဲ့အစညျးကို တညျထောငျပါတယျ။ ကမ်ဘာကို ဘကျပေါငျးစုံကနေ တိုးတကျပွောငျးလဲအောငျလုပျပေးနတေဲ့ ဘယျ အဖှဲ့အစညျး အမြိုးအစားကို မဆို ငှကွေေး လှူဒါနျး၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံပေးနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျး ဖွဈပါတယျ။ ယငျးအဖှဲ့မှ Manaing partner ဖွဈတဲ့ Matt Bannick မှ လာရောကျလို့ ဖနျတီးရာမှာ innovation, technology နဲ့ social change အကွောငျး ပွောပါမယျ... လာမယျ့ ဇှနျလ ၉ ရကျနေ့၊ အင်ျဂါညနေ ၆ နာရီဖွဈပွီး တကျရောကျလိုပါက http://goo.gl/Nzr7CD တှငျ စာရငျးသှငျးပါ။
National Day of Civic Hacking6June 2015 9:00 am - 6:00 pm Hackathon
9:00 am - 6:00 pm 06 June Hackathon
The 2014 Census Data is about to be released! If you would like to collaborate with developers, designers, civil society organisations to make the census data more useful and accessible for everyone in Myanmar, please come to Phandeeyar on Saturday,6June for THE NATIONAL DAY OF CIVIC HACKING. Free but register here.
Beyond Facebook: Digital Media Strategies for Myanmar3June 2015 6:00 pm - 8:00 pm Digital Media Meetup
Beyond Facebook: Digital Media Strategies for Myanmar
6:00 pm - 8:00 pm 03 June Digital Media Meetup
အမေရိကန်အခြေဆိုက် MDIF (Media Development Investment Fund) မှာ ဒီဂျစ်တယ် မီဒီယာ ဗျူဟာ ပညာရှင် တစ်ဦးအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်လျက် ရှိတဲ့ Ross Settles ဟာ မြန်မာပြည် ရောက်ရှိလာပြီး ဖန်တီးရာမှာ topic တစ်ခုနဲ့ ဟောပြော ပို့ချပါမယ်။ သတင်းမိဒိယာများ အနေနဲ့ Facebook ကို ကျော်လွန်းလို့ စစ်မှန်၊ အောင်မြင်တဲ့ ဒီဂျစ်တယ် မီဒီယာတစ်ခု ဘယ်လို ဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကို နည်းလမ်း၊ အိုင်ဒီယာ၊ အတွေ့အကြုံများဖြင့် မျှဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ပွဲ ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်လိုပါကhttp://goo.gl/9OpcsV တွင် စာရင်းသွင်းပါ။ လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ) မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမရေိကနျအခွဆေိုကျ MDIF (Media Development Investment Fund) မှာ ဒီဂဈြတယျ မီဒီယာ ဗြူဟာ ပညာရှငျ တဈဦးအနနေဲ့ လုပျကိုငျလကျြ ရှိတဲ့ Ross Settles ဟာ မွနျမာပွညျ ရောကျရှိလာပွီး ဖနျတီးရာမှာ topic တဈခုနဲ့ ဟောပွော ပို့ခပြါမယျ။ သတငျးမိဒိယာမြား အနနေဲ့ Facebook ကို ကြျောလှနျးလို့ စဈမှနျ၊ အောငျမွငျတဲ့ ဒီဂဈြတယျ မီဒီယာတဈခု ဘယျလို ဖနျတီးရမယျဆိုတာကို နညျးလမျး၊ အိုငျဒီယာ၊ အတှအေ့ကွုံမြားဖွငျ့ မြှဝပေေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အခမဲ့ပှဲ ဖွဈပွီး တကျရောကျလိုပါက http://goo.gl/9OpcsV တှငျ စာရငျးသှငျးပါ။ လာမယျ့ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ (ဇှနျလ ၃ ရကျနေ့ ညနေ ၆ နာရီ) မှာ ဖွဈပါတယျ။
BEYOND FACEBOOK: Wed 3rd June at 6pm. There's so much more to digital media than just Facebook. Learn from online guru Ross Settles what digital media strategies have been working in other emerging markets. Free but register herehttp://goo.gl/9OpcsV
Photoshop Workshop 31 May 2015 11:00 am - 3:00 pm Creatives Workshop
11:00 am - 3:00 pm 31 May Creatives Workshop
Introductory Photoshop workshop taught by two of Myanmar's leading professional creatives. Free but register here.
Intro to 3D Printing with Makerbot 28 May 2015 6:00 pm - 8:00 pm Makers Meetup
Intro to 3D Printing with Makerbot
6:00 pm - 8:00 pm 28 May Makers Meetup
Do you want to learn how to create actual physical things in your own home usinga3D printer? Come seeaMakerbot Replicator 2X 3D printer in action and learn about how 3D printing technologies are changing the world of product design and manufacturing. Learn more at 6pm on Thursday 28th May. Free but register here.
Google I/O Live Streaming and Hacknight 28 May 2015 10:30 pm - 2:30 am On The Big Screen
Google I/O Live Streaming and Hacknight
10:30 pm - 2:30 am 28 May On The Big Screen
Google I/O is on 28th and we are doing an I/O live viewing party and alao "HackNight" at 10 PM on 28th at Phandeeyar. If you want to learn about product and platform innovations of Google, don't forget to join us!
HackNight isatime set aside for coders and anyone generally interested in technology to gather and hack, work on homework, or just hang out.
Ruby on Rails Workshop 24 May 2015 9:00 am - 5:00 pm Geek Girls MM
9:00 am - 5:00 pm 24 May Geek Girls MM
Digital Detective Tales 20 May 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowledge Exchange
Digital Detective Tales
6:00 pm - 8:00 pm 20 May Knowledge Exchange
StartingaWordpress Website 19 May 2015 1:00 pm - 5:30 pm Civil Society Workshop
1:00 pm - 5:30 pm 19 May Civil Society Workshop
This workshop is for Civil Society Orgaisations that are planning to launchasimple WordPress website.
Please fill out this application form and we will contact you soon.
2) WordPress CMS managing
3) Theme editing
Technology & Elections: Indonesian Case Study 14 May 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowledge Exchange
Technology & Elections: Indonesian Case Study
6:00 pm - 8:00 pm 14 May Knowledge Exchange
Do you want to learn how technology can be used to promote free and fair elections? The 2014 Indonesia election is an amazing case study. Learn more at 6pm on Thursday 14th May. Free but register here
What is the "Open Data Movement" and Why Does it Matter? 13 May 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowledge Exchange
What is the "Open Data Movement" and Why Does it Matter?
6:00 pm - 8:00 pm 13 May Knowledge Exchange
Around the world people are pushing for "open data". This is especially valuable for increasing government transparency. Learn more on Wednesday 13th May at 6pm. Free but register here
OpenStreetMap Mapping Workshop 13 May 2015 12:00 am - 1:00 pm Knowledge Exchange
OpenStreetMap Mapping Workshop
12:00 am - 1:00 pm 13 May Knowledge Exchange
Does your organization use maps? Are you interested in mapping your work? Want to contribute to an open-source map of Yangon? Learn how on Wednesday 13th May 9am-1pm. Free but register here
Why I Started My Social Business 1 May 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowledge Exchange
Why I Started My Social Business
6:00 pm - 8:00 pm 01 May Knowledge Exchange
Business Model Development Workshop 28 April 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowledge Exchange
6:00 pm - 8:00 pm 28 April Knowledge Exchange
International #GirlsinICT Day 23 April 2015 9:00 am - 1:00 pm Knowledge Exchange
9:00 am - 1:00 pm 23 April Knowledge Exchange
10 Things We Learned About Digital Rights @ #RightsCon7April 2015 1:00 pm - 3:00 pm Tamin Boo
10 Things We Learned About Digital Rights @ #RightsCon
1:00 pm - 3:00 pm 07 April Tamin Boo
Crowdfunding Hardware Projects3April 2015 6:00 pm - 8:00 pm Makers Meetup
6:00 pm - 8:00 pm 03 April Makers Meetup
Free as in Freedom - with Richard Stallman2April 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowledge Exchange
Free as in Freedom - with Richard Stallman
6:00 pm - 8:00 pm 02 April Knowledge Exchange
Future Of Wearables 30 March 2015 6:30 pm - 8:00 pm Mobile Monday
6:30 pm - 8:00 pm 30 March Mobile Monday
Women Techmakers 29 March 2015 1:00 pm - 5:00 pm
1:00 pm - 5:00 pm 29 March
World Arduino Day 2015 28 March 2015 4:00 pm - 8:00 pm Makers Meetup
World Arduino Day 2015
4:00 pm - 8:00 pm 28 March Makers Meetup
AGILE Development Seminar 26 March 2015 6:00 pm - 8:00 pm Tech Meetup
6:00 pm - 8:00 pm 26 March Tech Meetup
The Importance of UI/UX 24 March 2015 6:00 pm - 8:00 pm Digital Media Meetup
6:00 pm - 8:00 pm 24 March Digital Media Meetup
Tech for Social Impact Workshop 4: Mandalay 20 March 2015 9:30 am - 5:00 pm Civil Society Workshop
Tech for Social Impact Workshop 4: Mandalay
9:30 am - 5:00 pm 20 March Civil Society Workshop
Creative Breakfast March 2015 20 March 2015 7:30 am - 12:00 am Creative Breakfast
Creative Breakfast March 2015
7:30 am - 12:00 am 20 March Creative Breakfast
The Art of Character Design 19 March 2015 6:00 pm - 8:00 pm Creatives Meetup
6:00 pm - 8:00 pm 19 March Creatives Meetup
Tech for Social Impact Workshop317 March 2015 9:30 am - 5:00 pm Civil Society Workshop
Tech for Social Impact Workshop 3
9:30 am - 5:00 pm 17 March Civil Society Workshop
Live Screening of Final Episode of Startup 16 March 2015 6:00 pm - 7:00 pm On The Big Screen
Live Screening of Final Episode of Startup
6:00 pm - 7:00 pm 16 March On The Big Screen
Yangon Entrepreneurship Experience Lab - Design Thinking Lab 13 March 2015 10:00 am - 5:00 pm Design Thinking Lab
Yangon Entrepreneurship Experience Lab - Design Thinking Lab
10:00 am - 5:00 pm 13 March Design Thinking Lab
Lessons fromaBank Hacker 12 March 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowledge Exchange
Lessons fromaBank Hacker
6:00 pm - 8:00 pm 12 March Knowledge Exchange
Perfecting Your Online Image 11 March 2015 6:00 pm - 8:00 pm Geek Girls MM
Perfecting Your Online Image
6:00 pm - 8:00 pm 11 March Geek Girls MM
Open Source Civic Tools3March 2015 6:00 pm - 7:00 pm Knowledge Exchange
Open Source Civic Tools
6:00 pm - 7:00 pm 03 March Knowledge Exchange
Love Your Language Translate-a-thon in Myanmar 28 February 2015 10:00 am - 2:00 pm Translate-a-thon
Love Your Language Translate-a-thon in Myanmar
10:00 am - 2:00 pm 28 February Translate-a-thon
Building Web App with Entity 28 February 2015 9:30 am - 12:00 pm Geek Girls MM
Building Web App with Entity
9:30 am - 12:00 pm 28 February Geek Girls MM
Creative Breakfast February 27 February 2015 7:30 am - 9:00 am Creative Breakfast
Creative Breakfast February
7:30 am - 9:00 am 27 February Creative Breakfast
Flying with Drones 27 February 2015 5:00 pm - 7:00 pm Makers Meetup
5:00 pm - 7:00 pm 27 February Makers Meetup
Developing Your Communications Strategy 27 February 2015 12:00 pm - 3:00 pm Civil Society Workshop
12:00 pm - 3:00 pm 27 February Civil Society Workshop
How to CreateaSuccessful Digital Campaign 24 February 2015 12:30 pm - 2:30 pm Tamin Boo
12:30 pm - 2:30 pm 24 February Tamin Boo
Open Mic For You 23 February 2015 6:30 pm - 8:30 pm Mobile Monday
6:30 pm - 8:30 pm 23 February Mobile Monday
Storytelling with Data and Inforgraphics 21 February 2015 10:00 am - 4:00 pm Digital Media Meetup
Storytelling with Data and Inforgraphics
10:00 am - 4:00 pm 21 February Digital Media Meetup
Want to getaMini MBA? 18 February 2015 6:00 pm - 8:00 pm Entreprenuership Training
Want to getaMini MBA?
6:00 pm - 8:00 pm 18 February Entreprenuership Training
How to have Impact as an Advocacy Group 18 February 2015 1:00 pm - 3:00 pm
How to have Impact as an Advocacy Group
1:00 pm - 3:00 pm 18 February
Tech For Social Impact Workshop217 February 2015 9:30 am - 5:00 pm Civil Society Workshop
Tech For Social Impact Workshop 2
9:30 am - 5:00 pm 17 February Civil Society Workshop
Tech For Social Impact Workshop 17February 2015 9:30 am - 5:00 pm Civil Society Workshop
Tech For Social Impact Workshop 1
9:30 am - 5:00 pm 07 February Civil Society Workshop
Cybersecurity and ICT Laws5February 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowledge Exchange
Cybersecurity and ICT Laws
6:00 pm - 8:00 pm 05 February Knowledge Exchange
Design in Action4February 2015 6:00 pm - 8:00 pm Creatives Meetup
6:00 pm - 8:00 pm 04 February Creatives Meetup
What is Civic Tech 28 January 2015 6:00 pm - 8:00 pm Knowledge Exchange
6:00 pm - 8:00 pm 28 January Knowledge Exchange
Introduction to Phandeeyar for Internews Alumni 27 January 2015 6:00 pm - 8:00 pm Digital Media Meetup
Introduction to Phandeeyar for Internews Alumni
6:00 pm - 8:00 pm 27 January Digital Media Meetup
Education Through Mobile and Skills for Mobile Industry 26 January 2015 6:00 pm - 8:00 pm Mobile Monday
6:00 pm - 8:00 pm 26 January Mobile Monday
Empowering Rural Population and Women with Tech 24 January 2015 5:00 pm - 8:00 pm Geek Girls MM
5:00 pm - 8:00 pm 24 January Geek Girls MM
Introduction to Google Cardboard 22 January 2015 6:00 pm - 8:00 pm Makers Meetup
Introduction to Google Cardboard
6:00 pm - 8:00 pm 22 January Makers Meetup
Peace Tech Exchange 13 January 2015 9:30 am - 5:00 pm Civil Society Workshop
9:30 am - 5:00 pm 13 January Civil Society Workshop
Innovation At the New York Times 12 January 2015 6:00 pm - 8:00 pm Digital Media Meetup
Innovation At the New York Times
6:00 pm - 8:00 pm 12 January Digital Media Meetup
Why Design Matters 8 January 2015 6:00 pm - 8:00 pm Creatives Meetup
6:00 pm - 8:00 pm 08 January Creatives Meetup
Myanmar Tales from the Valley5January 2015 6:00 pm - 8:00 pm Tech Meetup
Myanmar Tales from the Valley
6:00 pm - 8:00 pm 05 January Tech Meetup
500 Startups in Myanmar4January 2015 3:00 pm - 5:00 pm Knowledge Exchange
500 Startups in Myanmar
3:00 pm - 5:00 pm 04 January Knowledge Exchange